भित्री बस्त्रको छनौटमा हुनसक्छ यी गल्ती — Paschimnews.com News From Nepal
आज : २०७७ जेठ १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
भित्री बस्त्रको छनौटमा हुनसक्छ यी गल्ती
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१२/२७ गते
प्रजनन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले भित्री बस्त्रको बारेमा संवेदनसिल हुनैपर्छ । भित्री बस्त्र छालामैत्री वा सहज हुनुपर्छ ।
भित्री बस्त्रका लागि सुती नै सही हुनसक्छ । सुतीको भित्री बस्त्र लगाउँदा सिल्क वा सिन्थेटिकको जस्तो समस्या हुँदैन । सिल्क वा सिन्थेटिकमा हावा पस्दैन । यसले छालाको इन्फेक्सन हुनसक्छ । सिन्थेटिक कपडा नै किनेपनि भित्रको लाइनिङ सुतीकै हुनुपर्छ
कस्तो रंगको भित्री बस्त्र ? यो प्रश्न हामीलाई अर्थहिन लाग्छ । तर, चिकित्सकहरु भन्छन् सेतो पेन्टी लगाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । रंगबिरंगी पेन्टी आकर्षक देखिएपनि सफा एवं सेतो रंगको भित्री बस्त्र नै राम्रो हुन्छ ।
एक सर्वेक्षण अनुसार ७० देखि ८० प्रतिशत महिलाहरु गलत साइजको ब्रा लगाउनाले गम्भिर रोगहरुको चपेटामा आउँछन् । किनभने, गलत साइजको ब्रा लगाउनाले केवल ढाँड अथवा गर्दन दुख्ने मात्र होइन स्तन क्यान्सर, हार्ट बर्न, पाचन सम्बन्धी समस्या, छाला सम्बन्धी समस्या र टाउको दुख्ने जस्ता विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
स्तनपान गराउने आमा
स्तनपान गराउने आमाहरुले प्रायः बच्चाहरुलाई स्तनपान गराउने क्रममा सानो साइजको ब्रा लगाउँछन् । जसले छातिमा दबाव हुन्छ र स्तन भारी भएका कारण महिलाहरु झुक्छन् । त्यस्तो झुकावले ढाडको हड्डीमा दवाब पर्छ र ढाड दुख्न थाल्छ ।
कांँध र गर्दन दुख्नुको कारण कसिलो ब्रा र त्यसको स्ट्रिप्स हो । त्यसैले सधैं आफ्नो स्तनको साइज अनुसारकै ब्राको छनोट गर्नु पर्छ ।
छाला सम्बन्धी समस्या
कतै तपाईंको स्तन वरपर स–साना फोकाहरु त छैनन् ? यदि त्यस्तो समस्या छ भने त्यसको कारण तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको अत्याधिक कसिलो अथवा खुकुलो ब्रा हुन सक्छ । त्यसले गर्दा तपाईंलाई फंगल इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ ।
हिजोआज महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर समस्या धेरै हुन थालेको छ । अत्यधिक कसीलो ब्रा लगाउनाले रक्त सञ्चार रोकिन्छ र स्तन क्यान्सरको कारण बन्छ । त्यसबाहेक ब्रेस्ट लिगामेन्ट क्षति हुने खतरा पनि बढ्छ ।
केही महिलाहरुमा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या पनि हुन्छ । त्यसको कारण गलत साइजको ब्रँ लगाउनु हो । गलत साइजको ब्रा लगाउनाले निस्सासिएको महसुस हुन सक्छ र शरीरमा रक्त प्रवाह कम हुन सक्छ ।
गलत फिटिङ भएको ब्राले तपाईंको गर्दन र पछाडिको मांशपेशीहरुलाई सपोर्ट गर्दैन । जसले कांँधको पीडा बढ्छ र त्यसको सोझो असर तपाईंको टाउकोमा पर्छ ।
उमेर अनुरसार कती पटकसम्मको शारिरीक सम्बन्धलाई सामान्य मानिन्छ
कोरोना भाइरस वीर्यबाट सर्दैन, तर….
बाँकेमा एक वडाअध्यक्षलाई कोरोना पुष्टि
बाँकेमा एक वडा अध्यक्षलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । बुधबार साँझ थपिएका १६ जनामध्येमा वडाअध्यक्ष...
६ जिल्लाका एसपी फेरिए, बर्दियामा एसपी रजौरे
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जिल्लामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)काे काज सरुवा गरेकाे छ । ती जिल्लामा...
नेपालगञ्ज निषेधित क्षेत्र घोषित, तीन दिन घर बाहिर निस्कन नपाइने
बाँकेको नेपालगञ्जलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको छ । तीन दिनको फरकमा १६ जना कोरोना भाइरस...
कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेमाथि बाँके प्रहरीको कडा निगरानी
सामाजिक संजालमा अफवाह फैलाउनेमाथि बाँके प्रशासनले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । जिल्ला प्रहरी...
एक महिनाअघि क्वारेन्टाइनबाट भागेका थिए नेपालगञ्जका कोरोना संक्रमित
बाँकेका कोरोना संक्रमित पुरुष एक महिनाअघि क्वारेन्टाइनबाट भागेको खुलेको छ । शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि ...
कोहलपुरमा सेनाको गाडि र मोटरसाइकल ठोक्किदा भाईको मृत्यु, दिदि गम्भिर घाइते
सवारी दुर्घटनामा परेर बाँकेको कोहलपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भिर घाइते...
आजदेखि बाँकेमा अझै लकडाउन कडाः बिहान १० बजेपछि पसल बन्द गर्न निर्देशन
बाँकेको पछिल्लो समय लकडाउन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रशासनको आलोचना भएपछि स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्ने...